सन्दर्भ — पुलवामा आतंकवादी आक्रमण —आतंकवादीहरुको अखडा ध्वस्त पार्न सबैले कम्मर कस्नुपर्छ — गोविन्द कँंडेल
हाम्रो छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको जम्मु–कश्मीर पुलवामामा गत बिहीबार अपरान्ह अद्र्धसैनिक बलहरुमाथि गरिएको आत्मघाती आक्रमणले अनेकौं गम्भीर सवाल विश्वका तमाम शान्तिप्रेमी राष्ट्रहरुसमक्ष खडा गरेको छ । यस्तो कायरतापूर्ण आक्रमणलाई मूकदर्शक बनेर कहिलेसम्म टुलुटुलु हेरिरहने ? संयुक्त राज्य अमेरिका, अष्ट्रेलिया, इजरायल, श्रीलंका लगायत पचासौं राष्ट्रले उक्त आक्रमणको निन्दा एवं भत्र्सना गरेका छन् । हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोही बेलुकी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई फोन गरी सो आक्रमणको निन्दा गर्दै पीडित परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
विश्वले यस्ता आतंकवादी आक्रमणको निन्दा एवं भत्र्सना गर्नु आफैंमा सकारात्मक कुरा हो । तर आतंकवादीहरुको मनोबल गिराउन र यस्ता राक्षसी कृत्य दोहोरिन नदिन सारा विश्वले एकजुट भएर गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ । भारतले सो आक्रमण भएको केही घन्टापछि नै उक्त आतंकवादी आक्रमणका पछाडि पाकिस्तानको हात रहेको आरोप लगायो । पाकिस्तानमा रहेको आतंकवादी संगठन जैश—ए–मोहम्मदले सो आक्रमणको जिम्मेवारी लिएपछि भारतको आरोप सही रहेको जोसुकैले बुझ्न सक्छ । जैश—ए–मोहम्मदले पाकिस्तानमा खुलेआम आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको हुँंदा पाकिस्तानले सो संगठनप्रति अनभिज्ञता प्रकट गर्ने ठाउँं रहँंदैन ।
आतंकवादसँंग पाकिस्तानको संलग्नताबारे इस्लाम धर्मावलम्बी देश ईरानले समेत सबैको आँंखा खुल्नेगरी गम्भीर आक्षेप लगाएको छ । पुलवामा आतंकवादी आक्रमणपछि ईरानले भनेको छ –आत्मघाती आक्रमणकारीलाई पाकिस्तानले शरण दिन्छ । बिहीबार पुलवामामा आतंकवादी आक्रमण हुनुभन्दा एक दिन पहिला ईरानमा पनि यसै ढंगबाट आतंकवादीहरुले आत्मघाती आक्रमण गराए जसमा ईरानी रिभोल्युशनरी गार्ड्सका २७ सैनिकहरुको ज्यान गएको थियो ।
दिल्लीस्थित ईरानी दूतावासले ट्विट गरी भन्यो– ईरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता बहराम कासेमीले भारतमा भएको आतंकवादी आक्रमणको तीव्र निन्दा गरेका छन्, जसमा दर्जनौं मारिएका छन् ।
ईरानी सेनाका मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरीले आतंकवादी संगठन जैश–अल–अदलको जिकिर गर्दै भनेका छन् –पाकिस्तानको सरकारले यस्ता आतंकवादीहरुलाई शरण दिन्छ, जो हाम्रा सेना र इस्लामका लागि खतरा हुन् । उसलाई थाहा छ कि यिनीहरु कहाँं लुकेका छन् र पाकिस्तानी सुरक्षा बलले उनीहरुलाई समर्थन दिने काम गर्दछ ।
हुन त पाकिस्तानले पनि पुलवामा आतंकवादी आक्रमणको निन्दा गरेको छ तर भारत र ईरानको गम्भीर आरोपको पृष्ठिभूमिमा त्यस निन्दालाई गोहीको आँंसुका अतिरिक्त अरु के भन्न मिल्छ ? पाकिस्तानले घटनामा आफ्नो संलग्नताको प्रमाण ल्याउने कुरा गर्छ । जैश—ए–मोहम्मदका आतंकवादीहरु पकिस्तानमा निर्बाध गतिविधि गर्नु भनेको के हो ? अलकायदाका सरगना ओसामा बिनलादेन प्रकरण विश्वले पक्कै पनि बिर्सेको छैन । त्यस बेला पनि वर्षौंसम्म पाकिस्तानले संसारलाई भ्रममा अलमलायो, लादेन पाकिस्तानमा छैनन् भन्यो तर आखिर लादेन पाकिस्तानी राजधानीकै नजिकको शहर ऐबटाबादमा थिए । उनले वर्षौं त्यहाँं रहेर आतंकवाद विस्तार गरे, सयकडौं निर्दोष मारे र अन्त्यमा आफू पनि त्यहीं मारिए ।
यी कटु यथार्थलाई ध्यानमा राखेर विश्वमा शान्ति कायम गर्ने नयाँं अठोटका साथ शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरुले पाकिस्तानमा रहेका आतंकवादीहरुको अखडालाई ध्वस्त पार्न कम्मर कस्नुपर्छ । अब विलम्ब गरे भारत र ईरानको जस्तै आतंकवादी आक्रमणको चपेटामा क्रमैसँंग देरसबेर अरु देश समेत पर्ने सम्भावना कायमै रहनेछ ।